Nuux Lyles: Shan shay oo ay tahay inaad ogaato oo ku saabsan Sprinter Champion World
waxaa maamula 20-07-08
Ka raadi '' Noah Lyles '' ee 'Spotify' si aad uhesho muftaaxa Ameerikaanka ee inta badan laga hadlo oo waxaad ku soo degi doontaa gacmo la'aan. Waxa uu marayaa Nojo18 marka ay timaado duubista muuqaalkiisa farshaxanka (iyo wax ka qabashada Instagram), waa mid ka mid ah astaamaha quusta leh ee horyaalnimada adduunka ee 200m adduunka. Iyadoo Lyl ...
Isbeddelada Suuqa U-Bolts Global, Fursadaha, Darawalada, Caqabadaha iyo Falanqaynta Shanta Ciidan ee Porter
waxaa maamula 20-07-02
U-bolt waa bir ah qaabka qaabka xarafka U leh silsilado fiiqan leh labada daraf. U-bolts-ka ayaa markii hore loo adeegsaday in lagu taageero tuubbooyinka, tuubooyinka ay dheecaannada iyo gaasku marayaan. Suuqa caalamiga ah ee 'U-Bolts' waxaa lagu qiimeeyaa xx milyan oo doolarka Mareykanka ah sannadka 2020 waxaa la filayaa inuu gaaro xx milyan oo doolarka Mareykanka ah dhamaadka 2026, ...
Suuqa Suuqa Dhismaha Dhismeyaasha, Isbadalada iyo Fursadaha Ganacsi Weyn 2020 ilaa 2026: Hobson Injineer, Ketan Injineeriyada, Cal-Fasteners, Inc
waxaa maamula 20-06-28
Warbixinta Suuqa Suuqa Dhismooyinka waxay siisaa ilo qiimo leh oo xog xasaasi ah oo ku saabsan istaraatiijiyadaha ganacsiga iyo falanqaynta tartan ee Suuqa Weelasha Dhismaha. Waxay bixisaa guud ahaan warshadaha Oxygenated solvents falanqaynta koritaanka iyo qiimaha mustaqbalka, dakhliga iyo dhinacyo badan oo kale. Re ...
News Trending: Qiyaastii Suuqa Weyn Weyn ee Xaddiga Suuqa, Isbeddellada ugu dambeeyay, Kobaca iyo Wadaagga 2020 illaa 2025: ABB, Siemens, Eaton Corporation
waxaa maamula 20-06-22
Magaalada Chicago, Mareykanka: - Warbixinta ayaa u soo baxday aalad caqli iyo qiimeyn qoto dheer leh iyo sidoo kale agab aad u wanaagsan oo kaa caawin doona inaad sugto booska xoog ee Suuqa Weyn ee Wareegga Sare ee Dunida. Waxaa ku jira Porter Five Forces iyo falanqaynta PESTLE si loo qalabeeyo baskaaga ...
Suuqa U-Bolts 2020 oo ay weheliso Falanqaynta Saamaynta COVID-19 iyo Fursadda Ganacsiga 2026
waxaa maamula 20-06-18
Suuqa U-Bolts wuxuu dhowaan daabacay daraasad cilmi baaris oo laga sameeyay Global Market in kabadan 100 miis warshadeed oo war bixin iyo Jaantus ah ayaa ku faafay Bogag waana fududahay in la fahmo TOC faahfaahsan oo ku saabsan "Suuqa U-Bolts". Warbixintu waxay bixisaa macluumaad iyo kobcinta macluumaadka taxanaha ganacsiga ee waaxda si ...
Shaqaalaha awooda ayaa dayactira dhaliyaasha galaaska ee jaban Sherrill
waxaa maamula 20-06-15
SHERRILL - Waaxda Tamarta iyo Laydhka Sherrill-Kenwood ayaa dhammeystirtay shaqada si ay u beddesho weellada galaaska burburay ee ku yaal dhismayaasha woqooyi ee 115KV dhulka ay ku shaqeeyaan. Dhibaatooyinka haysta guryaha wax xaraashka ah waxaa la ogaadey xilliga qaboobaha inta lagu gudajiro qeybta joogtada ee waaxda ...
Macaamiisha cusub Coronavirus ka dib
Markaan dib u bilowno soosaarka sababtoo ah Coronavirus, waxaan ka helnay 10 macaamiil cusub oo Afrika iyo South America ah. Si loo damaanad qaado waqtiga hogaaminta, waxaan diyaarinay 4 mashiino cusub oo been abuur ah waxaana shaqaaleysiinay 20 shaqaale oo cusub.
Suuqa Xirmooyinka Fiilooyinka Sare ee Dunida 2020-2027 (COVID-19 Cusbooneysiin) Daraasad dhameystiran oo ay sameeyeen Ciyaartoyda Muhiimka ah | Warshadaha Cooper, ABB, Nidaamyada Tamarta Hubbell, GW Electric, Teknolojiyada Teknolojiyada
by admin 20-06-11
Warbixinta ku saabsan Suuqa Xirmooyinka Fiilaadda Weyn ee Dunida waxaa ku jira aragtiyo faahfaahsan iyo cilmi baaris qoto dheer. Warbixintu waxay soo bandhigaysaa qodobbada muhiimka ah ee horseedaya kobcinta suuqyada xirxiran ee Weydiimaha Sare ee Dunida, fursadaha aan looga faa'iideysan soo-saareyaasha, isbeddelada hadda jira, iyo soo-saareyaasha ...
Goodies Therapy Goodies for our 2020 Can-Am Maverick X3 RC - UTV GuideShock Theies Goodies for 2020 Can-Am Maverick X3 RC
waxaa maamula 20-06-09
Markuu Can-Am sii daayay daabacaadda 'X3 X RC (Rock Crawling') ee Turbo, waxay si dhakhso ah ugu noqotay macaamiisha macaamiisha sida caadiga ah u leh-guurguura sidii mid ka mid ah raadadkii ugu sareeyay ee ay fuusho. X3 X RC wuxuu ku darayaa 30-in. Taayirada Maxxis Liberty, HMWPE oo la casriyeeyay iyada oo la adeegsanayo hub, 4,500-lb (2,041 kg) oo leh xarig xarig, ...
Coronavirus wuxuu ku hanjabayaa Suuqa Caalamiga ah ee Muraayadaha Glass: Wadayaasha, Xanibaadaha, Fursadaha, iyo Hanjabaada (2019-2020)
waxaa maamula 20-06-05
Warbixinta ku saabsan Suuqa Insulator Glass-ka wuxuu siinayaa aragtida shimbirta aragtida ku saabsan sida ay wax u socdaan hadda gudaha suuqa Insulator Glass. Dheeraad ah, warbixinta ayaa sidoo kale tixgelinaysa saameynta sheekada COVID-19 ee masiibada ah ee ku jirta suuqa galaasyada muraayadaha waxayna bixisaa qiimeyn cad oo ku saabsan saadasha la filayo ...
Suuqa Garsoorka ee Glass Global Glass 2020- Saamaynta COVID-19, Falanqaynta Koboca Mustaqbalka iyo Caqabadaha | Lapp Insulators, SEVES, NGK-Locke, TE, GE
waxaa maamula 20-06-02
Warbixinta baarista Suuqa Garsoorka ee Suuqa Glass Insulator waxay soo bandhigaysaa fikradaha muhiimka ah ee la xiriira Suuqa Garsoorka ee Glass Insulator Suuqa xaalada hada. Intaa waxaa dheer, warbixintu waxay ka kooban tahay rajada mustaqbalka ee Garsooraha Glass iyadoo la falanqeynayo qaybaha kala duwan ee suuqa oo ay ku jiraan isbeddelada hadda, fursadaha, ...
Daraasaadka Saynisyada Suuqa Korontada ee Caalamiga ah (2015-2026): Qiimaynta qoto dheer ee Kobaca iyo Dhinacyada Kale
waxaa maamula 20-05-26
Geliyaha waa qeyb koronto oo loo istcimaalo in lagu bixiyo dahaar udhaxeeya labada koronto. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu bixiyo taageero farsamo ahaan aagggan codsigiisa. Waxa taas la mid ah, damiinku wuxuu kaloo ka hortagaa culeyska korantada, iyo culeyska deegaanka oo ka imaan kara cimilada ...